रानु मण्डलको जीवनीमा आधारित फिल्म खेल्न किन मानेनन् नायिकाहरु ? Canada Nepal
रानु मण्डलको जीवनीमा आधारित फिल्म खेल्न किन मानेनन् नायिकाहरु ?
क्यानाडा नेपाल भाद्र २७ २०७८
काठमाडौं - भारतमा सन् २०१९ मा एक भिडियो निकै भाइरल बन्यो । त्यो भिडियोमा भाइरल गायिका रानु मण्डलले गीत गाएकी थिइन् । वेस्ट बंगालमा विहानबेलुका छाक टार्न समस्या भएकी रानु मण्डलको भाग्य गायक हिमेश रेशमियाले चम्काइदिएका थिए ।
हिमेशले रानुलाई 'तेरी मेरी' बोलको गीत गाउँन लगाए । जुन गीत निकै भाइरल बन्यो । गीतको भिडियोलाई धेरैले हेरे र मन पनि पराए । अब भने उनकै जीवनीमा फिल्म बन्ने भएको छ । उक्त फिल्मको नाम ‘मिस रानु मारिया’ राखिएको छ ।
फिल्ममा रानुको भूमिका नायिका इशिका डेलेले निधाउने भारतिय मिडियामा बताइएको छ । ऋषि केश मण्डलले निर्देशन गर्ने यस फिल्ममा अन्य नायिकालाई अफर गरे पनि अस्विकार गरेका थिए ।
धेरै नायिकाको अस्विकारपछि इशिकालाई अफर गर्दा उनी मानिन् । इशिकाले फिल्म खेल्न राजी भएपछि मात्र निर्माण टिमले फिल्म घोषणा गरेको हो । इशिकाले यसअघि वेब सिरिज ‘सेक्रेड गेम्स’ मा काम गरिसकेकी छिन् ।
भाद्र २७, २०७८ आइतवार १८:५३:५१ बजे : प्रकाशित
# रानु मण्डल
तनावमा सोनु सुद, लाग्यो २० करोड कर छलेको आरोप
काठमाडौं - बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् सोनु सुद । कोरोना प्रभावितलाई सहयोग गरेर पछिल्लो समय उनी रियल लाईफका हिरो नै बनेका छन् । दुख परेकाहरुकाहरुलाई सहयोग गरेर भगवान बनेर चौतर्फि चर्चा पाएका सोनु अहिले एक झमेलामा फसेका छन् ।
उनीमाथि २० करोड कर छली गरेको आरोप लागेको छ । उनको घरमा आयकर विभागले छापा मारेपछि सोनु र उनका सहयोगीविरुद्ध २० करोडभन्दा बढी ट्याक्स छली गरेको आरोप लागेको हो ।
आयकर विभागले सोनुको घर र होटलसहित ६ स्थानमा छापा मारेको बताइएको छ । लगातार २० घन्टासम्म छापा मारेर आयकर विभागका कर्मचारीहरु सोनुका केही कागजपत्र लिएर गएका थिए । अहिले आईटी विभागले सोनुले कयौं फर्जी संस्था र अवैध लोनको रुपमा निकै पैसा जम्मा गरेको आरोप लगाएको छ ।
सोनुको ‘सूद च्यारिटी फाउन्डेशन’ ले गएको अप्रिलदेखि अहिलेसम्म १८ करोड ८४ लाख दान पाएको छ । जसमध्ये १ करोड ९ लाख रुपैयाँ विभिन्न कार्यमा खर्च भएको र १७ करोड रुपैयाँ फाउन्डेशनको ‘नन प्रोफिट’ बैंक एकाउन्टमा रहेको बताइएको छ ।
आश्विन ३, २०७८ आइतवार २१:४०:३८ बजे : प्रकाशित
अश्लील फिल्म बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका शिल्पाका पति राज धरौटीमा छुटे
काठमाडौं - अश्लील फिल्म बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रा छुटेका छन् । भारतका चर्चित व्यापारीमा गनिएका राज सोमबार ५० हजार धरौटीमा छुटेको भारतिय मिडियामा जनाइएको छ ।
अश्लील भिडियोको छायांकन भारतमा गर्ने र बेलायत पठाउने गरेको खुलासा भइसकेकोपछि यस मुद्दामा राजले चाडै छुट्कारा पाउने सम्भावना कम रहेको थियो ।
तर उनी सोमबार रिहा भएका छन् । उनीसँगै उनका सूचना प्रविधि प्रमुख रियान थोर्पेलाई पनि अदालतले रिहा गरेको बताइएको छ । गत जुलाई १९ मा राज र थोर्पेलाई अश्लील फिल्म बनाएको आरोपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
आश्विन ५, २०७८ मंगलवार ११:१९:५९ बजे : प्रकाशित
साउथ स्टार विजयले हाले आफ्नै बाबुआमाबिरुद्ध उजुरी, राखे यस्तो माग
काठमाडौं - साउथ फिल्मका चर्चित अभिनेता थलापति विजयले आफ्नै बाबु आमाबिरुद्ध उजुरी दिएका छन् । उनले आफुलाई राजनीतीमा आउन फोर्स नगर्न भन्दै पिता चन्द्रशेखरसहित ११ जनाबिरुद्ध उजुरी दिएको भारतिय मिडियामा जनाइएको छ ।
चन्द्रशेखरले विजयको नाममा २०२० सालमा राजनीतिक पार्टी अल इन्डिया थलापति विजय मक्कलको घोषणा गरेका थिए । चन्द्रशेखरले विजयलाई राजनीतीमा आउन आग्रह पनि गरिरहेका थिए ।
साथै उनले छोरा विजय चाँडै राजनीतिमा आउने दाबी पनि गरिरहेका थिए । तर विजयको भने राजनीतीमा कुनै रुची छैन । उनी राजनीतीमा काम गर्न चाहादैनन् । विजयले आफु राजनीतीमा नआउने बारे जानकारी गराइसकेका छन् ।
उनले अब आफ्नो फोटो कुनै राजनीतिक दल प्रयोग गरेमा कारबाही गर्ने बताएका छन् । उनले हालेको उजुरीमा ११ जना मानिसहरुलाई भेट्न नदिन र आफ्नो फोटोको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
आश्विन ५, २०७८ मंगलवार १५:०२:३४ बजे : प्रकाशित
# थलापति विजय
नागा र सामन्थाको सम्बन्ध झन बिग्रियो, छुट्टाछुट्टै बस्न थाले
काठमाडौं - साउथ फिल्मका चर्चित अभिनेता नागा चैतन्य र उनकी पत्नि सामन्था अक्किनेनी छुट्टाछुट्टै बस्न थालेका छन् ।
उनीहरुबीचको सम्बन्ध चिसिएपछि नागा र सामन्था अलग(अलग घरमा बस्न थालेको भारतिय मिडियाका बताइएको छ । केही समयअघिदेखि उनीहरुबीचको सम्बन्ध राम्रो नभएको र सम्बन्धविच्छेद गर्न तयारसम्म पुगेको बताइएको छ।
उनीहरुबीच परिवारको संख्या बढाउने बिषयमा सहमती नहुँदा छुट्टिन तयार भएका छन्। फिल्मको काम छोडेर परिवारको संख्या बढाउन भन्ने नागाको चाहाना रहेको र त्यसमा सामन्था सहमती नभएको बताइएको छ ।
अक्किनेनी नागार्जुनका छोरा समेत रहेका नागाले सन् २०१७ मा अभिनेत्री सामन्थासँग विवाह गरेका थिए । विवाह गरेको केही समयपछि उनीहरुको वैवाहिक जीवन ठिक ढंगले नचलिरहेको खबर बाहिर आएको थियो । सम्बन्ध विग्रिएपछि अहिले दुवै एउटै घरमा बस्न छोडेको बताइएको छ ।
सामन्था आफ्नो करियर अगाडि बढाउन हाइदरबादको घर छोडेर मुम्बई गएको बताइएको छ । यस्तै नागा भने अहिले बुबाआमासँग बस्न थालेका छन् ।
आश्विन ५, २०७८ मंगलवार २१:४६:०२ बजे : प्रकाशित
# नागा चैतन्य
कोरोना महामारीले थलिएको बलिउड उकासिदै, अक्षयको फिल्म 'बेल बटम' ले बिदेशमा मात्र कमायो २० करोड
काठमाडौं - पछिल्लो समय अभिनेता अक्षयकुमारको फिल्म 'बेल बटम' को निकै चर्चा छ । गत १९ अगस्टमा रिलिज भएको यस फिल्मले शुरुवातमा राम्रो कमाई गर्न नसकेपनि पछिल्लो समय भने धमाकेदार कमाई गरेको छ ।
रञ्‍जित तिवारीले निर्देशनमा बनेको यस फिल्मले विदेशमा मात्र हालसम्म २० करोड बढी कमाई गरिसकेको भारतिय मिडियामा बताइएको छ ।
यस फिल्मको कमाई हेर्दा कोरोनाको महामारीले थलिएको बलिउड अब उकासिने देखिएको छ । चार दिने विकेन्डमा १३ करोड २५ लाख कमाएको फिल्मले प्रदर्शनको एक महिनामा बक्सअफिस बाट मात्रै ३० करोड कमाएको छ । यस फिल्मले स्वदेशमा मात्र ३० करोड कमाएको छ ।
आश्विन ७, २०७८ बिहिवार १२:२८:२४ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - अभिनेता गोविन्दाले आफ्ना छोरालाई पनि बलिउडमा प्रबेश गराउने भएका छन् । लामो समयदेखि छोरा यशवर्धनलाई बलिउडमा डेब्यु गराउने तयारी गरेपनि कोरोनाका कारण ढिलाई भएको थियो ।
तर अब भने छोरालाई यसै वर्ष लञ्च गर्ने गरी तयारी भइरहेको सुनीता आहूजाले बताएकी छिन् । यसअघि छोरी टीना अहुजाले फिल्म ‘सेकेन्ड ह्यान्ड हज्बेन्ड’ बाट बलिउडमा प्रबेश गरेकी थिइन् ।
सुनीताले यशवर्धनको बलिउड डेब्यू लकडाउनका कारण ढिलाइ भएको र अब डेब्युको अन्तिम कुराकानी भइरहेको बताइन् । फिल्मको लागि यशवर्धनलाई कोरियोग्राफर गणेश आचार्यले डान्स सिकाइरहेका छन् । फिल्मकै लागि यशवर्धन जिम पनि धाइरहेका छन् ।
आश्विन ८, २०७८ शुक्रवार २०:४३:०९ बजे : प्रकाशित